काठमाडौंमा मर्निङ र इभिनिङ वाक स्वास्थ्यका लागि झन् खतरनाक
Saturday,7Apr, 2018 3:07 PM
काठमाडौं जिन्दगी यति व्यस्त छ शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि कसरत गर्ने फुर्सद पनि धेरैलाई हुँदैन । तर, बिहान या बेलुका थोरै समय निकालेर हिँड्ने बानी धेरैले बसाल्न थालेका छन् । कयौं काठमाडौंवासी मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकमा निस्किने गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएर नै विहान तथा बेलुका हिँड्ने, दौडिने या कसरद गर्ने गरिन्छ । तर, केही रिसर्च तथा विज्ञहरुले काठमाडौंमा विहान र बेलुका नै वायुप्रदूषण बढी भएको चेतावनी दिने गरेका छन् । उनीहरुले मर्निङ र इभिनिङ वाक गर्नेले काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको असर बढी खेप्नुपर्ने बताएका छन् ।
सडक विस्तार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ पाइप बिछ्याउने काम भइरहेकाले अहिले धुलोको मात्रा काठमाडौंमा अत्यधिक छ । सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँले त वायु झन् प्रदूषित छ । उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधन, इँटाभट्टा, उद्योग र फोहर बाल्दा निस्कने धुवाँले पनि वायु प्रदूषणमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । करीब ५० लाख मानिसको बसोबास गर्ने काठमाडौंमा यस्तो धुवा र धुलोले ‘स्लो प्वाइजन’को काम गरिरहेको छ ।
प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पारिरहेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । धुलो र धुवाँले रुघाखोकी, फेक्सोको निमोनिया, श्वासप्रश्वासको समस्या तत्काल निम्त्याउने समस्या हुन् । तर, दीर्घकालीन रुपमा दम, फोक्सोको क्यान्सर, मुटुलगायतका गम्भीर रोग यसैले निम्त्याउने डा. बस्नेत बताउँछन् । वायु प्रदूषणले अबको १० वर्षपछि दम र मुटु रोगीको संख्या निकै बढ्ने उनको अनुमानसमेत छ ।
बिहान र बेलुकी बढी प्रदूषण किन ?
वातावरण विभागले देशको समग्र वायु प्रदूषणको स्थिति जाँच र अनुगमन गरी कार्ययोजना तय गर्न देशभर वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । हालसम्म पुल्चोक, रत्नपार्क, कीर्तिपुर, धुलिखेल, शंखपार्क, भैँसेपाटी, भक्तपुर, सौराहा, लुम्बिनी र पोखरामा तीन गरी १२ स्टेशनको स्थापना गरिसकेको विभागका सहायक प्रवक्ता मोहनदेव जोशी बताउँछन् ।
त्यसको २४ घण्टे तथ्यांक केलाउँदा दिउँसोको समय (११ देखि ४) कम तथा बिहान र बेलुकीको समय बढी प्रदूषण देखिएको छ । वार्षिक तथ्याँक केलाउँदा कात्तिकदेखि माघसम्म अत्यधिक प्रदूषण हुने गरेको पाइएको छ ।
उपत्यकाको कचौरा आकारको भौगोलिक अवस्थाले बिहान, बेलुका तातो र चिसो हावा तलमाथि पर्ने समय हुने हुँदा प्रदूषण बढ्ने गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धान शाखा प्रमुख डा मेघनाथ धिमाल बताउँछन् ।
जाडो याममा सबै इँटाभट्टा बढी चल्ने र पानी कम पर्ने भएकाले वायु प्रदूषण दोब्बर हुन्छ । अनुसन्धान प्रमुख डा धिमाल भन्छन्, ‘परिषद्को अध्ययनमा उपत्यकाको वायु सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तेब्बर र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा आठ गुणा बढी प्रदूषित पाइयो ।’
धुलोभन्दा धुवा हानिकारक
काठमाडौंको हानिकारक प्रदूषणको (पिएम) स्रोतमा सवारी साधन ३८, धुलो २५, कृषि कार्य १८ र इँटाभट्टा ११ प्रतिशत रहेको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडी बताउँछन् ।
वायु प्रदूषणको तात्कालिक समस्या धुलो भएपनि दीर्घकालीन समस्या भने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ हो । उद्योग कलकारखाना, इँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँ र फोहरको नियमित अनुगमन र नियमन नहुँदा समस्या विकराल बन्दै छ । उपत्यकाका अस्पतालहरुबाटै बिना प्रशोधन निस्कने पानी र फोहरले पनि स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ ।
उपत्यकामा हाल ११२ इँटाभट्टा छन् । त्यसमध्ये ११० चिम्नीमा आधारित रहेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार बताउँछन् ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर स्वास्थ्यका लागि धुलोभन्दा धुवाँ बढी घातक भएको तर्क गर्छन् । ‘धुलो क्षणिक समस्या हो र धुलोको कण धुवाँको तुलनामा ठूला हुन्छन् । तर धुवाँमा बढी हानिकारक र साना रासायनिक कण हुन्छन् ।’
धुवाँको प्रदूषणले क्यान्सरलगायत गर्भवती महिला र गर्भको शिशुको वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्ने वातारवणविद् तुलाधर बताउँछन् ।